कुलमान घिसिङ आजदेखि पदमुक्त ! – Palika Times
कुलमान घिसिङ आजदेखि पदमुक्त !
पालिका टाईम्स २८ भाद्र २०७७, आइतबार प्रकाशित
२८ भाद्र, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल आज सकिन लागेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी पद आजदेखि खालि भए पनि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको प्रस्ताव अझैसम्म पनि क्याबिनेट नगएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चार वर्षअघि २९ भदौ २०७३ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद सम्हालेका घिसिङको कार्यकाल सकिएसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न एक महिना अघिदेखि नै दौड सुरु भइसकेको छ । प्राधिकरणको आगामी चारवर्षे कार्यकालका लागि पुन कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ऐनअनुसार तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ, विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी पदमा पुनर्नियुक्ति भन्दा पनि नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने भएका कारण आज कार्यकाल सकिए पनि २९ भदौसम्म निर्णय हुनेछ ।
घिसिङको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा घिसिङलाई नै आगामी कार्यकालका लागि जिम्मेवारी दिनुपर्ने जोडदार माग उठिरहेको छ । सर्वसाधारण, कलाकारदेखि उनको पक्षमा रहेका नेता कार्यकर्तासमेत रहेका छन् ।
यसबीच ऊर्जा मन्त्रालय पनि प्राधिकरणमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा सकारात्मक रहेको स्रोतले बतायो । यसअघि ऊर्जामन्त्री पुनको प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको अनौपचारिक छलफलमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सकारात्मक देखिएको स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पनि घिसिङको विकल्प खोज्ने पक्षमा नरहेको स्रोतले बतायो ।
दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आमजनमानसमा लोकप्रिय बनेका घिसिङ आफैं एक कार्यकाल दो-याउन चाहन्छन् । घिसिङले प्राधिकरणको ३५औं वार्षिक साधारण सभामा प्रसारण लाइन, भारत र बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीलगायतका योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यकाल थपको मनसाय राखेका थिए । केही दिन अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा पनि उनकै कार्यकाल दोहो-याउनुपर्ने जोडदार माग हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणको भावी नेतृत्वका लागि विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह रहेका छन् । प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य, प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले रहेका छन् । घिसिङले प्राधिकरणलाई सरकारी संस्थानमा पहिलो नम्बरमा ल्याउन गरेको योगदान, प्राधिकरणमा भएका सुधारको मूल्यांकन गर्दै अहिले प्राधिकरणको नेतृत्वका लागि कुलमान घिसिङको अर्को विकल्प नरहेको भन्दै चौतर्फी माग रहेको छ ।
प्राधिकरणमा अब आउने नेतृत्वका लागि चुनौती पनि उत्तिकै रहेका छन् । प्रसारणलाइनको निर्माण, उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने, गुणस्तरीय बिजुली उपभोक्तासम्म पु-याउनुपर्ने, चार वर्षअघि करिब ९ अर्ब घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरण लगातार चार वर्ष नाफामा गएको छ । घिसिङले नेतृत्व सम्हालेलगत्तै ठूलो घाटामा रहेको प्राधिकरणले नाफा आर्जन गर्न सुरु गरेको थियो । २०७३ भदौमा कार्यकारी निर्देशकमा रूपमा प्राधिरकणमा प्रवेश गर्दा वार्षिक ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको संस्था आएको ११ महिनामै घाटा हटाउँदै १ अर्ब ४७ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यसपछि गत आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) सम्म आइपुग्दा ११ अर्ब ६ करोड नाफा गएको छ । आजको राजधानी दैनिक मा खबर छ।
सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा २४ बेपत्ता, ६ जनाको शब भेटियो
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको सचिवालयद्वारा कोभिड-१९ प्रभावितहरुलाई सघाउन समिति गठन